Abahlinzeki Besigaba Sokuhlanzwa Kwegazi neFektri - Isigaba Sokuhlanzwa Kwegazi Abakhiqizi
Izihlungi ze-Ultrapure dialysate zisetshenziselwa ukuhlunga amabhaktheriya kanye ne-pyrogen
Isetshenziswe ngokubambisana nedivayisi ye-hemodialysis eyenziwe nguFresenius
Umgomo wokusebenza ukusekela ulwelwesi lwe-fiber olungenalutho ukucubungula i-dialysate
Idivayisi yeHemodialysis bese ilungisa i-dialysate ihlangabezana nezidingo.
I-Dialysate kufanele ishintshwe ngemuva kwamasonto ayi-12 noma ukwelashwa okungu-100.
Amasekethe Oyinyumba We-Hemodialysis Wokusetshenziswa Kwodwa athintana ngqo negazi lesiguli futhi asetshenziswa isikhathi esifushane samahora amahlanu. Lo mkhiqizo usetshenziswa emtholampilo, nge-dialyzer ne-dialyzer, futhi usebenza njengesiteshi segazi ekwelashweni kwe-hemodialysis. Uhlu lwegazi olusebenzisa imithambo yegazi lukhipha igazi lesiguli emzimbeni, futhi isekethe elinemithambo yegazi libuyisa igazi “elelaphiwe” esigulini.
Ukuhlanzeka okuphezulu, hhayi ukufingqa.
Ukukhiqizwa okujwayelekile kwebanga lezokwelapha, ukulawula amabhaktheriya okuqinile, i-endotoxin nokuqukethwe kwensimbi esindayo, ukunciphisa ngempumelelo ukuvuvukala kwe-dialysis.
Izinga elizinzile, ukuhlushwa okunembile kwe-electrolyte, ukuqinisekisa ukuphepha kokusebenzisa imitholampilo nokwenza ngcono kakhulu ikhwalithi ye-dialysis.
Lo mkhiqizo usetshenziselwa inqubo yokuhlanzwa kwegazi njengomtholampilo we-hemodiafiltration kanye nokwelashwa kwe-hemofiltration kanye nokulethwa koketshezi olungena esikhundleni.
Isetshenziselwa ukuhlunga kwe-hemodia kanye ne-hemodiafiltration. Umsebenzi wawo ukuhambisa uketshezi olusetshenziswayo ukwelashwa
Izinhlobo ezahlukene Izishubhu ze-HDF zilungele umshini we-dialysis ohlukile.
Ungangeza umuthi nokunye ukusetshenziswa
It is ikakhulukazi yakhiwa iphayiphi, T-ngokuhlanganyela futha tube, futhi isetshenziselwa hemodiafiltration futhi hemodiafiltration.
I-SXG-YA, SXG-YB, SXJ-YA, SXJ-YB, SXS-YA ne-SXS-YB
Iphakethe lesiguli esisodwa, iphakethe lesiguli esisodwa (iphakethe elihle),
Iphakethe lesiguli esimbili, iphakethe lesiguli esiphindwe kabili
Lo mkhiqizo usetshenziselwa izinqubo zokwelashwa zokwelashwa kwe-hemodialysis. it is ikakhulukazi yakhiwa ugqoko plastic, ithawula non-ephothiwe oyinyumba, iodine ukotini swab, band-aid, itampon ukumunca ukusetshenziswa kwezokwelapha, iraba igilavu ​​yokusetshenziswa kwezokwelapha, ingcina tape ukusetshenziswa kwezokwelapha, drapes, embhedeni patch ephaketheni, gauze oyinyumba notshwala izinkemba.
Ukunciphisa umthwalo wabasebenzi bezokwelapha nokwenza ngcono ukusebenza kahle kwabasebenzi bezokwelapha.
Izesekeli ezisezingeni eliphakeme ezikhethiwe, amamodeli amaningi ukumiswa kokuzikhethela nokuguquguqukayo ngokuya ngemikhuba yokusebenzisa imitholampilo.
Amamodeli nokucaciswa: Uhlobo A (okuyisisekelo), Uhlobo B (olunikezelwe), Uhlobo C (olunikezelwe), Uhlobo D (imisebenzi eminingi), Uhlobo E (ikhithi ye-catheter)
I-HDTA-20, i-HDTB-20, i-HDTC-20, i-HDTD-20, i-HDTA-25, i-HDTB-25, i-HDTC-25, i-HDTD-25, i-HDTA-30, i-HDTB-30, i-HDTC-30, i-HDTD-30, i-HDTA- 50, HDTB-50, HDTC-50, HDTD-50, HDTA-60, HDTB-60, HDTC-60, HDTD-60